Tahiry horonantsary - fototra afrikhepri
Fifandraisana SOKAJY VIDEOS
Horonantsary fanadihadiana sy tafatafa nataon'i Tistrya (Lahatsary)
Nassim Haramein dia nitantara ny diany izay nahatonga azy liana tamin'ny natiora ny zava-misy sy ny fiasan'izao rehetra izao. https://www.youtube.com/watch?v=qN1ZaFtIBuI&list=UUhcIFyud8lRlBqJtjBQKuFA&index=8
Tantaran'ny ankapobeny momba an'i Afrika (Lahatsary)
Fa maninona isika no miresaka an'izao tontolo izao momba an'i Afrika sy tsy maneran-tany afrikanina? Satria ireo afrikana dia naneho fahaiza-manao miavaka amin'ny fambolena fiompiana, amin'ny teny hafa mba hitazonana ny kolontsain'izy ireo manokana, ...
Indray mandeha tany Mesopotamia - Documentary (1998)
Any Syria sy Iraq, eo anelanelan'ny Tigris sy Eofrates, tany mangina. Tsy misy manasa anao hitady, handavaka. Tsy misy afa-tsy ny biriky hafahafa voasokitra amin'ny fambara tsy manam-paharoa amin'ny endrika ...
Ahoana no fomba anaovana afovoan-dranomasina Afrikana?
Ahoana ny fomba hanaovana donut afrikanina? ity misy andian-dahatsary izay ho tia hanomana donut afrikanina.
Ahoana no nahatonga ny tany mora - Raj Patel (Video)
Raj Patel dia mpahay toekarena, mpanoratra, mpikaroka ary mpikatroka politika. Manam-pahaizana manokana amin'ny krizy ara-tsakafo dia nandray anjara tamin'ny fanaparitahana ny filozofia fizarana.
Ny fampianaran'i Krishnamurti (Lisitry ny lisitra)
Jiddu Krishnamurti dia lehilahy teratany indiana izay manentana fampianarana hafa.
Ny lalana telo amin'ny fahatsiarovana an'i Kamite (Video)
Andao hiverina amin'ny fomban-drazantsika, ny kolontsaintsika, ny filozofiantsika, ny fomba fiainantsika, ny rafitra politikantsika, ny toekarentsika. Tsotra fotsiny, andao isika indray, alohan'ny tara loatra.
Ilay feo Francophone Africa (Lahatsary)
Ny seho dia mahita kandidà marobe manao matso izay manomboka ny diany amin'ny audition jamba hisafidianana mpanazatra hanampy azy ireo handresy ny vanim-potoana. https://www.youtube.com/watch?list=PLPPr_sjKyrplh_rtKDfb2yrow9w13usDf&v=Ql60GJaqt3k&feature=emb_title
Hypnose, Self-hypnosis, Fitsaharana mitarika (Lahatsary)
Tongava mora foana amin'ny tanjon'ity hypnosis ity ny tanjonao. Avelao ny tenanao hitari-dàlana amin'ny fihainoana ity hypnotherapist matihanina ity. Ny dingana voalohany mankany amin'ny fahombiazana dia ny fanovana ny sainao.
Mifanohitra amin'izany, ny fantsona fanabeazana hahafantarana sy hianarana ny tantaran'ny zanak'olombelona
Io no fantsom-panabeazana hahafantarana sy hahatakarana ny tantaran'ny zanak'olombelona amin'ny fomba fijery vaovao. Io no fantsona ahafahanao manatsara ny fahitanao an'izao tontolo izao sy ny fiainana noho ny ...
Piramida lehibe K2019 - Documentary (2019)
Lafiny maro, mahafeno fepetra ho "antsipirihany" no niniana natolotr'ireo manam-pahaizana amin'ny tsipika rehetra. Saingy io indrindra ny antsipiriany izay mametraka fanontaniana ...
Fampivoarana manokana (Audio)
Ny fivoaran'ny tena manokana dia karazana fanao tsy mitovy hevitra amin'ny an'ny eritreritra samihafa, izay mikendry ny hanatsara ny fahalalan'ny tena, hanatsara ny talenta ary ...
Inner World (Video)
Misy ny zaridaina manaitaitra mampitohy ny zavatra rehetra Nantsoinay hoe Akasha, ilay feo tany am-boalohany Om, ny vatosoa amin'ny rojo Indra, ny firindran'ny fasana sy ny an'arivony hafa anarana ...
Page 1 ny 5 1 2 ... 5 manaraka